Xasan Sheekh & Shariif Sheekh Axmed oo dib ugu soo laabtay Muqdisho | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Xasan Sheekh & Shariif Sheekh Axmed oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Xasan Sheekh & Shariif Sheekh Axmed oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Wafdiga ay hoggaaminayeen Madaxweynayaashii hore ee Somaliya Shariif Sheekh Axmed & Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho, kadib safarkii ay ku tageen Magaalada Baledweyne.
Shariif iyo Xasan Sheekh oo ka wada tirsan Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxay Magaalada Baledweyne u taggeen, sidii ay u soo qiimayn lahaayeen waxyeelada ka dhalatay fatahaadaha, xilli toddobaadkii hore ay iclaamiyeen in laba boqol kun oo dollar, ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka fatahaadaha.
Intii ay ku sugnaayeen Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan, waxa ay kulan la qaateen Ugaas Xasan Ugaas Khaliif & Qaar ka mid ah Odayaasha reer Hiiraan oo ay ka dhageysteen warbixino la xiriirta xaaladihii ugu dambeeyay ee fatahaada.
Xubnahan Wafdigaan ayaa si nabadgelyo ah casir liiqii galabta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho.
Madaxweynayaashii hore ee Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud & Shariif Sheekh Axmed, ayaa maanta markii ay u ambabaxayeen Magaalada Baledweyne waxa ay la kulmeen saacado kooban oo hakad lagu galiyay Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
Wali masuuliyiintaan si toos ah ugama aysan hadlin hakadkii maanta Garoonka Aadan Cadde lagu galiyay.